Fokontany Andraisoro Mirongatra ny hala-botry, 12 taona dia efa manao asa ratsy
Zazavavy kely naolan’ny anadahin-dreniny Nivoaka ny hopitaly fa tsy ampy vola
Mampahonena ny tranga mahazo an’i Canizia, ilay zazavavy kely vao sivy taona monja monina ao Bemanevika, Sambava, naolan’ny anadahin-dreniny ihany.
Fiompiana akoho manara-penitra Hampianarina maimaimpoana etsy Mahamasina
Betsaka ireo olona miezaka mitady lalam-bola hafa ankehitriny mba hanatsarana ny fidiram-bola ao an-tokantranony.
Fanentanana momba ny fiahiana ara-tsosialy Miara-misalahy ny CNaPS sy ny minisiteran’ny asam-panjakana
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia 15 mey 2019 teny amin’ny foiben’ny CNaPS Ampefiloha ny fanokafana ny fanentanana lehibe hivoizana ny « Asa mendrika ho an’ny rehetra sy fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara ».
Fanitarana ny lalana eto an-drenivohitra Nijery ny fizotry ny asa ireo mpamatsy vola
Nidina ifotony nijery ny asa fanamboarana ny lalana amin’ny rocade Avaratra atsinanana-atsinanana, omaly ireo mpamatsy vola toy ny AFD, ny vondrona Eoropeanina … taorian’ny 12 volana nanatanterahana ny asa.
Sekoly Sainte Famille Mahamasina Mpampianatra 47 notolorana mari-boninahitra
Fotoana nanan-danja ho an’ireo sekoly lasalianina miisa 12 tantanan-dry frera manerana ny Nosy ny datin’ny omaly alarobia 15 mey.
Mampatsiahy indray ny CNaPS Omena telo volana ny mpampiasa hanao fampilazana
Didian’ny lalàna ny mpampiasa hanoratra CNaPS ny mpiasa noraisiny hiasa ara-dalàna.
Fanomezana ra maimaimpoana Tsy mampazoto firy ny olona
Tsy mitombo mihitsy ireo mpanome ra eto amintsika, raha araka ny fanazavan’Atoa Nomena, tompon’andraikitra misahana ireny fakàna ra etsy sy eroa ireny eo anivon’ny « Centre National de transfusion sanguine »
Mirongatra ny vaky trano sy ny hala-botry ao amin’ny fokontany Andraisoro Boriborintany fahadimy amin’izao, hoy ny lehiben’ny vaomieran’ny fandriampahalemana Rasolofomanana Roland.
Roa na telo isan’andro raha kely ny fitarainana voaray eo anivon’ny fokontany, betsaka indrindra amin’izany ireo olona voaendaka. Ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina no antony, hoy izy. Eo ihany koa ny hamaroan’ireo ankizy mitsoaka an-daharana an-tsekoly noho ny hasarotan’ny fiainana. 12 taona mantsy no kely indrindra amin’ireo mpangalatra sy mpanendaka efa tratra. Vao tamin’ny herinandro teo, ohatra, dia olona iray no tratra namaky trano teny an-toerana. Nomarihin’ity lehiben’ny voamieran’ny fandriampahalemana ity fa fepetra efa noraisin’izy ireo amin’izao ny fanapariahana ny andrimasom-pokonolona ankoatra ny fanaraha-maso ireo vahiny tonga mihaodihaody ao an-tanàna nefa tsy misoratra anarana eny amin’ny fokontany.